Warren Buffett Mitsara: Biography uye ake makumi maviri neshanu mitsara inonyanya kuzivikanwa | Ehupfumi Zvemari
Kune vakawanda vanoita zvemari vakasarudzika avo vakawana budiriro huru nekuda kwemaitiro avo ekudyara, ruzivo uye hunhu. Mumwe weakakurumbira hapana mubvunzo kuti Warren Buffett, anozivikanwawo seye guru rekudyara. Parizvino ndiye murume wechina akapfuma kwazvo pasirese, akapfuurwa naBernard Arnault, Jeff Bezos naBill Gates. Pfuma yemurume uyu nguva pfupi yadarika akapfuura $ 100.000 bhiriyoni. Zvisingashamisi, mukurumbira wakabatsirawo kuratidza makotesheni ane mukurumbira naWarren Buffett ayo anogona kutibatsira kuti tinzwisise zviri nani pasirese, kusanganisira nyika yezvemari, uye kutikurudzira.
Kuti tinzwisise zvirinani kukosha kwemurume uyu mumusika wemasheya uye nhaurwa dzake dzakakurumbira, tichatanga tambotaura zvishoma nezvehupenyu hwake tobva tapa runyorwa rwemitsara makumi maviri neshanu yakakurumbira naWarren Buffett. Kana iwe uchifarira musoro wenyaya, ramba uchiverenga.
1 Aya makumi maviri neshanu anozivikanwa mitsara yaWarren Buffett
2 Ndiani Warren Buffett
2.1 Investment mukukosha kana kukosha kuisa mari
Aya makumi maviri neshanu anozivikanwa mitsara yaWarren Buffett
Kutenda nebasa rake refu munyika yezvemari, Warren Buffett akaunganidza makore nemakore ekuziva uye nehungwaru. Ndokusaka tiri kuenda kuzoona pazasi makumi maviri neshanu emitsara inozivikanwa kwazvo iyo Ivo vanozotibatsira isu kuzvikurudzira pachedu uye kurangarira zvakakosha zvinhu kuti ubudirire.
Mutemo nhamba 1: Usarasikirwe nemari. Mutemo nhamba 2: Usakanganwa mutemo nhamba 1. »
"Hupfumi hukuru hahuitwe nepotifoliyo yemasheya makumi mashanu."
"Tinofanira kuisa mari kwehupenyu hwese."
"Musika unobatsira avo vanoziva zvavari kuita, asi hairegerere avo vasingazive."
"Haufanire kuita zvisingaite zvinhu kuti uwane maresitoreti anoshamisa."
"Uine miriyoni yemadhora uye zvakakwana 'matipi' unogona kuparara mugore."
"Zvakanaka kudzidza kubva pane zvakaitika kwauri, asiwo kubva kune vamwe."
"Usambobvunza mubati wevhudzi kana tichida kugerwa."
"Kana tikawana zvinopfuura chimwe chinhu chikuru pagore, pamwe tiri kuzvinyengera."
"Wall Street inowana purofiti kubva muchiitiko, asi muzvinashawo anoiwana kubva mukusaita basa."
«Muhupenyu iwe unongofanirwa kuita zvishoma zvinhu mushe uye dzivisa zvikanganiso zvakakura. Mukudyara zvakafanana. »
"Izvo zvishoma zvinoratidza vamwe kuratidza, kunyanya kuchenjera isu tinofanirwa kuve."
"Ini ndinokara kana vamwe vachitya uye ini ndinotya kana vamwe vachikara."
"Muzvinabhizimisi akachenjera anodzivisa makaro uye anoita kuti kutya kuumbe mukana."
"Nguva yakanakisa yekutenga bhizimusi ndeye apo vamwe vanhu vari kuitengesa, kwete kana vari kuitenga."
"Usatarise kumashure. Unogona chete kurarama kumberi. "Kune zvakawanda zviri kumberi zvekuti hazvina musoro kufunga nezve zvatingaite."
'Iko kudyara kunofanirwa kuve nehurongwa hwaro. Kana bhizinesi risinganzwisiswe, zvirinani kuridzivirira. »
«Mutengo ndizvo zvaunobhadhara; kukosha ndiko kwaunowana. "
"Nhoroondo inotidzidzisa kuti hatidzidze kubva munhoroondo."
"Kusava nechokwadi ndiyo shamwari yemurairidzi yenguva refu."
"Iwe haugone kutenga izvo zvinozivikanwa uye uve chokwadi."
"Nzira yakanaka kupfuma hakusi kurasikirwa nemari."
"Chibvumirano chakanaka hachisi chekutenga chakanaka nguva dzose, asi inzvimbo yakanaka yekuchitsvaga."
“Zvakanyanya kuoma kuita mazana esarudzo dzakanaka muhupenyu. Ini ndinosarudza kumisikidza portfolio yangu kuitira kuti ini ndingo fanirwa kuita shoma yeavo akangwara sarudzo.
"Maonero edu ekudyara anokodzera hunhu hwedu uye nzira yatinoda kurarama hupenyu hwedu."
Ndiani Warren Buffett
MuAmerican investor uye muzvinabhizinesi Warren Edward Buffett akaberekwa munaAugust 30, 1930 muOmaha, Nebraska. Nhasi anoonekwa seumwe wevashambadzi vakakura kwazvo pasirese. Uye zvakare, ndiye mutungamiri, CEO uye mugovani mukuru weBerkshire Hathaway, kambani inobata iyo ine zvese kana chikamu chemasheya emapoka akasiyana ebhizinesi.
Kunze kwekuzivikanwa seye guru rekudyara, iye anonziwo chirevo cheOmaha. Warren Buffet mutsigiri wekudyara mutengo Uye kunyangwe aine hupfumi hwakawanda, anorarama hupenyu hwakaoma. Iye achiri kugara mumba imweyo yaakatenga mudhorobha reOmaha muna 1958 ne $ 31.500.
Iye zvakare anozivikanwa munhu munyika yehunyanzvi uye akazivisa muna 2006 kuti achapa 99% yehupfumi hwake kuBill neMelinda Gates Foundation, inova hapana chimwe uye hapana pasi peiyo huru yakazvimiririra yekupa hwaro huripo. Muna 2007, magazini nguva Akamubatanidza mune rake runyorwa rwevanhu zana vane simba kwazvo munyika. Chimwezve chikonzero nei tichifanira kufarira zvinyorwa zvaWarren Buffett.
Kunyangwe vanhu vazhinji vachifunga kuti mumwe munhu akapfuma kudaro anogona kungova nemari yakawandisa nenhaka kana plug, chokwadi ndechekuti hazvisi izvo zvakaitika kuna Warren Buffett. Akatanga kushanda semupepanhau wekutakura mukomana uye akazopedzisira aratidza kufarira midhiya, maakazoita mari yake yekutanga kubudirira. Sezvo iye aishanda, aive achiwana degree kubva kune bhizinesi chikoro kuYunivhesiti yePennsylvania. Kuburikidza nekuchengetedza, kutsvagisa musika, uye zviwanikwa zvakakosha, Warren Buffet akawana chinzvimbo chake parizvino semunhu akapfuma kwazvo pasi rose.
Investment mukukosha kana kukoshesa kuisa mari
Kana tichitaura nezvekudyara mukukosha tinoreva a mari yekudyara iyo yakavakirwa pakutenga kuchengetedzeka pamutengo wakaderera. Muzviitiko izvi pane yekuchengetedza margin, unova iwo musiyano unobva mukukosha kwemukati wechikamu nemutengo wemusika.
Nezve kukosha kwemukati kana kukosha, uku ndiko kukosha kune icho chikamu pachacho chine. Inogona kuverengerwa nekuwedzera iyo yeramangwana mari inogadzirwa zvinoenderana neyazvino kukosha kukosha. Mune mamwe mazwi: Intrinsic kukosha ndiko kukosha kwakadzikiswa kubva mukuparadzirwa mune ramangwana. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo yemukati kukosha kwakatemwa neanouya kugovera kunogona kuverengerwa nekufungidzirwa maererano nehunhu hwekufungidzira husiri hwese hwakarurama nguva dzese. Mamiriro ehupfumi nemusika ari kuchinja uye anoita kuti zviito zviitwe nezviitiko zvakasiyana zvinoitika uye zvingave zvisina kufanofungidzirwa.
Naizvozvo, zvinoenderana neinvestment in value, kana mutengo wemusika uri mushoma pane kukosha kwakakosha kwesitoko, zvingangoita kuti mutengo wayo uchawedzera mune ramangwana, apo musika paunogadzirisa. Pane matambudziko makuru maviri kana uchitevera huzivi hwekudyara:
Fungidzira kuti kukosha kwemukati mechitoko kana zita kungave chii.
Fungidzira kana kukosha kuchizoratidzwa mumusika.
Ndinovimba aya makotesheni makuru kubva kuna Warren Buffett uye nyaya yake zvakabatsira kukurudzira iwe kuti urambe uchiita zvakanaka pamusika wemasheya. Iwe unogona kutisiira isu maonero ako uye zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Warren Buffett Quotes
Chii chinonzi pension chirongwa
Mari yemari yemari